Farmaajo oo casuumay maamulada kana jawaabin baaqii Aqalka Sarre
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqdey in madaxweyne Farmaajo uu shir-madaxeed ku casuumay madaxda dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah.
Marti-qaadka Farmaajo ayaa kusoo aadaya xilli uusan ka jawaabin dalab dhowaan ka yimid Aqalka Sarre oo ku saabsan in ay shiraan madaxda dowlad goboleedyadda iyo dowladda dhexe.
Sidda lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Villa Soomaaliya, shirka waxaa looga hadlayaa; doorashada, amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, qabyo-tirka dastuurka iyo dhaqaalaha.
Qaar kamid ah maamulada dalka ayaa horey ugu eedeeyay dowladda Farmaajo in ay fashilsay shir horudhac ah u ahaa wadahadalka kadib markii Koonfur Galbeed ay diidey waqtiga iyo goorta la qabtay.
Villa Soomaaliya oo wadashaqeynta kala dhaxeysa maamulada aysan fiicneyn ayaa lagu eedeeyay burbur ku yimid wadahadaladii horey u qabsoomay "markii ay hogaanka sarre muujiyeen tanaasul la'aan".
Mooshinkan ayaa dhalilay xiisad siyaasadeed iyadoo Villa Somalia ay billowday qorshe...
Soomaliya 26.05.2020. 18:29